Life in Fukuoka "Nepali" Vo.48
कपिन्द्र मानन्धर (KP)
Bartender at Wolfgang’s Steakhouse JAPAN Inc.
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.46
【भ्यालेन्टाईन डे अर्थात् प्रेम दिवस】
तपाईंहरु प्रायःजसोलाई थाहा नै होला, फेब्रुअरी १४ तारिक भनेपछि भ्यालेन्टाईन डे अर्थात् प्रेम दिवस!
तेस्रो शताब्दीको रोममा सैनिकहरूको विवाहमा प्रतिबन्ध थियो। गोप्य रूपमा विवाह सम्पन्न गराईरहेका भ्यालेन्टाईन पादरीलाई, अपराधको आरोप लगाई मत्युदण्ड दिइएको थियो। त्यस घटना पश्चात्, भ्यालेन्टाईन डेलाई प्रेमको प्रस्ताव राख्ने दिन भन्ने गरिन्छ। जापानमा, यस दिन सामान्यतया चकलेट दिने गरिन्छI
जापानको मौलिक संस्कृतिको रूपमा, यस दिन अफिसको हाकिम वा सहकर्मीलाई दिईने Giri-choko, त्यस्तै समान लिंगको साथीहरूसँग आदानप्रदान गरिने Tomo-choko बाहेक, आफ्नै लागि महँगो केहि सामान खरीद गर्ने Goho-bi-choko को प्रचलन देखिन्छ।
यस अतिरिक्त, आजकल कुकिज र म्याकारुन उपहारको रुपमा दिने मानिसहरु पनि बढेर आएको देखिन्छ।
भ्यालेन्टाइन डे नजिकिन्दै आउँदा शहरका मिठाई पसलहरू व्यस्त हुने गर्छन्।
पछिल्लो समयमा हाम्रो देश नेपालमा पनि यो दिवस मनाउनेहरुको सङ्ख्या बढ्दो छ।
【Fukuoka City Medical Interpreting Call Center】
फुकुओका शहरमा, विदेशीहरूलाई चिकित्सा संस्थामा जान सजिलो हुने गरि, Fukuoka City Medical Interpreting Call Center को स्थापना गरिएको छ।
अस्पतालमा डाक्टरसँग कुरा गर्दा, त्यस्तै अस्पतालमा वा अस्पतालको औषधालयमा सिफारिस गरिएको औषधि पाउँदा आदिमा, कल सेन्टर मार्फत टेलिफोन अनुवादन सेवा प्रदान गरिन्छI यो सेवा २४ घण्टा हरेक दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छI
फोन नम्बर रहेको छ, ०९२-७३३-५४२९, फेरि एकपटक, ०९२-७३३-५४२९।
१८ भाषाहरुमा उपलब्ध यो सेवा निशुल्क होI
यद्यपि, कल महसुल भने फोन गर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्छ।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.45
【उमे अर्थात् जापानी आलुबखडा】
तपाईंले कहिल्यै उमे अर्थात् जापानी आलुबखडाको फूल देख्नु भएको छ?
उमे चीनको स्थानीय रुपमा पाइने रूख हो, र बर्षको यस समयमा, यसले केही हरियाली र फूलहरूका साथै बगैंचामा सुगन्धित फूलहरू फुलाउँदछ।
करीब ५०० प्रकारका उमेहरू पाइन्छन् जुन सजावट, खाद्य र जापानी जीवनसँग जोडिएको छ।
तपाईंले आलुबखडाको फलबाट बनेको Umeboshi र रक्सी Umeshu सुन्नु भएको छ ?
आलुबखडा फलफूलहरुमध्येमा पौष्टिक तत्वका लागि सर्वोतम मानिन्छ, र यसमा प्रोटीन, भिटामिन, क्याल्सियम, पोटाशियम, फोस्फोरस र फलाम जस्ता तत्वहरू प्रशस्त समावेश भएको हुन्छ।
साथै उमेलाई फुकुओका प्रान्तको फूलको रूपमा लिईन्छI तपाईंले उमेको रुख, Dazaifu-tenmanguu, Hirao-sanso, abura-yama आदि धेरै स्थानहरुमा, देख्न सक्नुहुन्छ।
【काम सम्बन्धि परामर्श लिने ठाउँ】
तपाईंलाई कामको कुरामा केही समस्या परेको छ कि?
"काम शुरु गर्नु अघि, के-के कुराहरु चेक गर्नु पर्ने थाहा छैन", "काम छोड्नलाई भनिएको छ", "तलब राम्ररी नपाएको", "कामको सम्बन्धमा चिन्तित," आदि जस्ता कम्पनी र काम सम्बन्धि बिषयमा, Fukuoka Labor Affairs Office मा, निःशुल्क परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।
परामर्शको बिषय सम्बन्धमा, गोपनीयता कडा पालन गर्ने भएकाले ढुक्क भएर परामर्श लिनुहोस्I
विदेशी भाषामा परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने, कृपया "Fukuoka Multilingual Assistance and Information Center（Fukuoka　MAIC）" मा फोन गर्नुहोस्।
१९ भाषाहरुमा उपलब्ध यो सेवाको लागि फोन नम्बर रहेको छ, ०१२०-२७९-९०६,
फेरि एकपटक, ०१२०-२७९-९०६ ।
वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षका बिदाका बाहेक, हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म परामर्श सेवा प्रदान गर्दछौं।